Robot Robot • Gold, Solika, Forex & Crypto • Fitsapana sy fanombanana
Robot mifanakalo varotra ▼
Robot varotra natokana ho an'ny tsena volamena (xauusd).
Robot varotra natokana ho an'ny tsenan'ny cryptocurrency.
Robot varotra natokana ho an'ny tsenan-tsolika.
Robot varotra natokana ho an'ny tsena Forex.
Robots ara-barotra mifototra amin'ny entam-barotra.
Crypto Investment ▼
Mampiasa vola amin'ny Big Data cryptocurrency.
Mampiasa vola amin'ny volamena sy diamondra miaraka amin'ny crytos-nao.
Manambola amin'ny varotra trano miaraka amin'ny blockchain Ethereum.
Mividiana, mitahiry ary mahazoa vola crypto mihoatra ny 250
🎥 Fampianarana an-tsarimihetsika, manomboka amin'ny blockchain ka hatramin'ny crypto
Fahalalana tena ilaina momba ny cryptocurrency tsirairay
Tranonkala Ofisialy PantheraTrade
Fitantanana ny fahazoan-dàlana
Mifandraisa amin'ny atg-system.com
Mifandraisa amin'ny atcbot.io
Midira ao amin'ny MetaCapital
Mifandraisa amin'ny Equiti
Trading Bots & Cryptobots
Ny maodelin'ny orinasam-pandraharahana dia manome ny mpampiasa tombony handray anjara amin'ny tsena ara-bola amin'ny vola, entana, metaly sarobidy ary crypto. Miaraka amin'ireo robots varotra atolotra anao dia tsy mila traikefa na fahaiza-manao amin'ny lafiny ara-bola na fampandrosoana IT ianao. Ka avelao ny algorithman'ny varotra hikarakara ny renivohinao amin'ny fomba hendry sy amim-pitandremana, nofidinay ho amin'izany.
Noho ny hatsaram-panahy dia hitari-dalana anao sy hamaly ny fanontanianao aho, saingy tadidio fa ny loza ateraky ny fahaverezana dia manan-danja toy ny tombony voaangona. Ampiasao fotsiny ny vola vonona ho very. Atombohy ary andramo ireo robots atolotra miaraka amin'ny renivola fanombohana kely mba hahatakarana ny paikadiny.
Peu de connaissance requise
Miteraha fidiram-bola mandeha ho azy amin'ny alàlan'ny fampiasam-bola am-pahendrena.
Saika tsy misy azo atao!
Midira, apetraho ny volanao ary avelao ny robot hifanakalo ho anao.
Angony tsy tapaka ny karamanao sy ny volanao rehetra amin'ny fotoana rehetra.
Robots varotra sy fahafahana ara-bola
Ireo robot mpivarotra dia nosedraina nandritra ny volana maromaro, azo antoka sy mahomby
Hatramin'ny nitsaharan'ny varotra ho andraikitry ny manam-pahaizana, ny robot ara-barotra dia nanafika ny Internet ary afaka miteraka tombony ara-bola ho an'ny tsirairay. Nanjary malaza amin'ny varotra mandeha ho azy ireo robots ireo, amin'ny anaran'ny mpampiasa azy, mitahiry fotoana sarobidy. Satria maro ny fisolokiana momba an'io lohahevitra io, dia mitsapa, manadihady ary manoro ny bots ara-barotra sasany mihoatra ny hafa izahay.
Robot azo ianteherana
AutoTrade Gold 🏆
Natao hivarotra ny mpivady XAU / USD miaraka amin'ny fitantanana risika ambany sy paikady scalping fohy. Scalping natokana ho an'ny tsena volamena.
Natao hivarotana ny tsenan'ny cryptocurrency ary indrindra indrindra ny Bitecoin BTC miaraka amin'ny fikorontanan'ny tsena.
✅ Autotrade Crypto
Misy amin'ny 2022
AutoTrade Forex dia robot varotra mifototra amin'ny tsena Indoneziana. Forex Autotrade dia ho hita mandritra ny fahavaratry ny 2021.
Natao hivarotana ny tsenan-tsolika izy io. Autotrade Oil dia mikendry ny hipetraka na hidina arakaraka ny vidin'ny solika barika.
Fin 888 dia robot ara-barotra Indoneziana mifototra amin'ny varotra fiat vola. Fin888 dia robot stable nefa tsy dia mahomby noho nyAutotrade Gold.
Ecosystem misy robots 18 misy 2 amin'ny crypto mifandray amin'ny API Binance. Ny bots hafa dia ampifandraisina amin'ny broker regulated Equiti.
✅ FlashBot, FlashCoin...
Natao hivarotana ny mpivady EUR / USD, ny fomba fiasa voalohany amin'ny SmartXBot dia mifototra amin'ny fironana sy ny varotra ny toerana fohy. Tsy mahomby noho ny ATG.
Smartxbot / Net89
Robots azo itokisana
Ny iray amin'ireo fifanakalozana tsara indrindra dia manolotra paikady robot 4 mifanaraka amin'ny mpivady vola tadiavina.
✅ Kucoin Bots
Rafitra fividianana volamena sy diamondra miaraka amin'ny fandoavam-bola amin'ny vola Fiat, famindrana na crypto.
✅ Goldamin'ny làlana
Robot varotra Indoneziana mivarotra ny tsenam-bolamena. Rafitra fizarana tombony toy ny Smartxbot.
Indoneziana varotra robot mivarotra ny tsena crypto amin'ny broker Lotus International.
Robot ara-barotra mifototra amin'ny tsena Forex.
Natao hivarotra ny mpivady EUR / USD, Coved dia iray amin'ireo rindrambaiko tsara indrindra miaraka amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy ary iray amin'ireo teknolojia fitantanana risika mandroso indrindra.
Natao hivarotra ny mpivady EUR / USD miaraka amin'ny fitantanana risika ambany ary paikady scalping fohy.
Natao hivarotra tsiroaroa vola marobe, Elitrob dia manadihady tsy tapaka ny tsena Forex, mitady ambaratonga andrim-panjakana lehibe sy faritra misy vahana varotra be.
Natao hivarotana mpivady vola sy crypto marobe amin'ny paikady varotra mandroso sy andro.
❌ Robot Bit
Rafitra famerenam-bola miorina amin'ny doka.
Mahita robot 3 manokana amin'ny varotra scalping sy ny varotra andro manara-maso ny mpivarotra matihanina 12 ary mivarotra ny vola lehibe indrindra.
Fanavaozana sy fanaraha-maso ny robot ara-barotra sasany
Manara-maso ny sasany izahay robot fifanakalozana ary ny hafa dia toa tsy azo ianteherana sy maharitra rehefa mandeha ny fotoana. Ity misy lisitra tsy feno amin'ny robots ara-barotra izay arahintsika akaiky: Smart Evo, Maestrem, GoldNy ahy, Pipskiller, RoyalQ, BTS, Fortune8, RoboTop, King Trader, LVBet, Algate, Alyssa, Agility, Class VIP, Ferrari, Ricabot, Vega88, Euro Miner, Millionnaire Prime, Dragon, DGP Bot, Alphabet, Smartech, IQSmart, SpecialS , Ninebot, ISM, Viggo, AIC Genius, Anti MC, Ximple Trade, Crown, ER, MR X999, GTA88, Jaderock 78, RX1, Pro-100, Notheory, Sun Star Indo, Infinity Gold, GBPUSD, Index Scalper, Diamond, Bibot, ISM, GatotkacaFX, ProMax, Copet ...
Halaviro ireto robots varotra ireto (Scams / Ponzi): EvoTrade, Eureka, Mark AI, King Coin, Antares, Sparta, Shigeru, King Gold, Mandaka, Voltnexo, LogicPro, Jokermoon, Tron Life, Zeppelin, HTFox, Skidn ...
Na ny mpivarotra tsara indrindra aza dia miankina amin'ny robot mba hanetsehana ny baikony eny an-tsena.
Haingana kokoa izy ireo, manisa haingana kokoa ary tsy misy fihetseham-po.
Ny robot varotra mandeha ho azy dia rafitra mandeha ho azy izay miasa arakaraka ny masontsivana na ny fandaharam-potoana napetrak'ireo ekipa mpivarotany. Raha vao mifandray amin'ny kaonty varotrao ianao, dia hihetsika eo amin'ny tsena ara-bola ny robot tsy misy idiran'ny olombelona, ​​izay manala ireo lesoka ateraky ny fihetsem-pon'ny olombelona.
Ireo rindrambaiko ireo dia namboarina mba hametrahana automatique ny fizotry ny varotra sy hahazoana tombony maharitra, miaraka amin'ny tahan'ny risika / valisoa. Ireo algorithma mandroso miaraka amina tsikombakomba artifisialy dia manadihady tsy tapaka ny tsena, mivarotra ho azy ary manidy akaiky ny varotra amin'ny fitantanana famatsiam-bola tsara (drawdown farafahakeliny 3%), amin'ny alàlan'ny torolàlana mifototra amin'ireo mari-pahaizana matematika, statistika ary tsena manokana. mpihazona vatsim-pianarana
DigiPrime / Pansaka / Pantheratrade, tahaka ny Meta Capital dia namolavola fiaraha-miasa maromaro miaraka amin'ireo manampahaizana samihafa amin'ny sehatry ny varotra mandeha ho azy.
Ny robot tsirairay dia manana paikady ara-barotra manokana miankina amin'ny tsena kendrena. Araha-maso tsy tapaka izy ireo, havaozina araka ny vaovao ara-toekarena ary optimizen'ny ekipa mpivarotra matihanina.
Ilaina ity dingana fanatsarana mitohy ity mba hahazoana vokatra maharitra. Ny tsenan'ny Forex dia tontolo iainana tena mivaingana sy miovaova hatrany. Ity haavon'ny fanatsarana ity dia miantoka fa ny algorithm dia mijanona eo ambony ary mandeha araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra.
"Raha vaovao amin'ny tontolon'ny robot fifanakalozana ianao dia raiso ny torohevitro: miloka ny vola tsy ilainao, avelao ny mpivarotra hanangona ny fandresenao mandra-pahazoanao ny filokana voalohany. Aorian'izay, ihany Bonus. "
Paikady ara-bola manokana
Ampiasao ny Combo
Robot / Crypto / Stacking.
Ity ny iray amin'ireo paikadin'ny fampiasam-bola mba hahazoana fidiram-bola passive nefa miovaova araka izay azo atao:
Mampiasà robot varotra iray na maromaro amin'ny alàlan'ny fametrahana vola miaraka aminy brokertsirairay avy.
Miaraka amin'ny tombom-barotra azo, mividiana crypto amin'ny fifanakalozana lehibe (Binance, Coinbase na Crypto.com).
Mivarotra na mitazona ny anao cryptocurrency mba hamoronana zanabola isam-bolana sy / na hividianana vokatra sy serivisy isan'andro amin'ny crypto anao toy ny Binance Card ho an'ny fiantsenana sakafo, fanaovana volo, lasantsy, famandrihana ary fialam-boly ...
Robot varotra milamina sy mahomby
Manambola sy manaparitaka
Mianara bebe kokoa momba ny varotra robot
4 fanontaniana / valiny
Fa maninona no atao varotra varotra amin'ny varotra varotra?
Ny fampiasam-bola amin'ny robot varotra dia fomba iray malaza tsy an-kijanona izay afaka manaporofo fa tena mahasoa. Noho izany, ny varotra matetika dia manodidina ny antsasaky ny baiko napetraka any Frantsa sy ny 70% -n'ny baiko napetraka any Etazonia. Ireo tarehimarika ireo dia mampiseho mazava ny fahombiazan'io karazana fampiasam-bola io.
Tombony marobe no tokony homarihina amin'ny robot varotra:
- voalohany indrindra, ataony izay ahafahana mamokatra tombam-bidy tsara kokoa amin'ny fananana, mifanaraka amin'ny filan'ny tsena ny vidiny,
- lasa tsiranoka kokoa ny tsena, mora mividy sy mivarotra
- mampihena ny vidin'ny varotra ho an'ny orinasa sy olon-tsotra izy ireo
Karazan'olona inona no tena liana amin'ny varotra robot ankehitriny?
Ankehitriny, misy karazana mpampiasa vola mampidi-doza izay mampiasa robot ara-barotra mandeha ho azy:
Ny olona mitady hanatsara ny loharanon-karenany
Mihamaro ny olona te hirotsaka amin'ny varotra mba hahazoana fidiram-bola fanampiny. Ny robot ara-barotra dia safidy tsara indrindra amin'ity tranga ity satria mamela anao hampiasa vola amin'ny tsena ara-bola nefa tsy manana fahaiza-manao betsaka toy ny mpivarotra matihanina.
Mahita mpivarotra mitombo isa izay mampiasa robot varotra izahay, toy ny tranga amin'ireo robot atolotray anao ao amin'ny tranonkala ankehitriny. Raha ny marina, ny varotra mandeha ho azy dia mitaky asa kely kokoa ary mamela hamorona fidiram-bola be. Ny mpivarotra dia mitandrina hatrany amin'ny fisafidianana robot varotra kalitao izay manome famantarana mahasoa sy mieritreritra.
Fahazarana ara-bola mahazatra
Ny mpampiasa vola dia mitady hatrany ny fotoana ahafahana manova ny renivohiny. Robot robots dia teknika izay manintona hatrany ity karazana mombamomba ity. Eny tokoa, rehefa mahita robot tsara ireo mpampiasa vola ireo dia tsy misalasala izy ireo manambola vola be.
Maninona aho no manome ny fanampiako maimaim-poana?
Ny tanjoko dia ny hanohana anao amin'ny fisoratana anarana ireo robot aseho. Amin'ny alàlan'ny tranokalako dia tsy mampiseho afa-tsy robot mifanakalo izay efa nofakafakaiko nandritra ny herinandro maro aho. Mazava ho azy fa misy foana ny loza mety hitranga satria, ndao hotadidintsika fa ny robot fifanakalozana tsirairay dia mijanona ho fampiasam-bola mampidi-doza ary noho izany dia mety hiteraka fatiantoka.
Omeko anao ny fampahalalana rehetra ilainao hanombohana amin'ny varotra mandeha ho azy, amin'ny mangarahara tanteraka. Ny tanjona dia ny hahafantaranao tsara izay hidiranao nefa tsy misy tsy ampoizina tsy ampoizina rehefa tonga ianao.
Nandritra ny fiainako dia naniry mafy ny hizara aho mba hahafahan'ny manodidina ahy handroso. Mitovy ihany amin'ny tranokala Robots-Trading.fr. Ny zava-misy tsotra amin'ny fahafantarana fa mandray anjara amin'ny fampandrosoana ny tetikasanao no tena nahafa-po ahy.
Ny varotra sy ny vola crypto dia nanjary tena fientanam-po nanomboka tamin'ny taona 2017. Nandany ora maro aho namakafaka ireo tsena vaovao ireo sy ireo loharanom-bola vaovao azo avy amin'izy ireo. Ankehitriny, ny tanjoko dia ny hizara izany fitiavana izany aminao mba hankafizanao izany.
Ireo botika varotra samihafa izay hitantsika eny an-tsena amin'izao fotoana izao
Androany dia misy karazana robot mifanakalo varotra. Ny mombamomba ireo robot ireo dia miovaova arakaraka ny fivoaran'ny tsena. Araka izany, ny tsena sasany dia milamina kokoa raha ny hafa kosa hanana fironana miharihary kokoa, tsy azo ovaina kokoa.
Trend neutral trading robots
Ny robots varotra isan-karazany dia mifantoka manokana amin'ny tsena izay marin-toerana ary tsy miovaova be. Ireo robot ara-barotra ireo dia miankina amin'ny famantarana ara-teknika (ny filaharan'ny teboka mamela ny famakafakana ny tsenam-bola antoka mba haminavina ny fomba hivoaran'ny vidiny). Ny robot varotra karazana Range dia handinika ireo tondro ara-teknika ireo tsy tapaka ary hanao hetsika fividianana sy fivarotana rehefa lasa be loatra ny tsena na oversold.
Mivarotra robot amin'ny fanarahana fironana
Ity karazana robot fanaovana varotra ity dia hahazoana antoka fa mahita ireo fironana navoaka teo amin'ny tsena tamin'ny fanokafana toerana manaraka ny fironana manjaka ao aminy. Araka izany, isaky ny mahita ny fironana mety mahasoa ny robot dia hanokatra na hanidy toerana izy. Mariho fa ny kaonty izay tsy mifanohitra amin'ny fironana fotsiny no raisina.
Robots (varotra varotra matetika) matetika (THF)
Izy ireo no robot ifaninanana indrindra. Institiota ara-bola no tena namorona azy ireo. Izy ireo dia afaka manatanteraka baiko ao anatin'ny segondra vitsy (scalping). Ny tanjon'ny varotra matetika dia ny fitrandrahana fiovan'ny toetr'andro kely.
Ny fisoratana anarana tsirairay dia vita avy amin'ny rohy referral!
Ary minoa ahy, tsy maharary intsony izany!
Tsy mora ny manomboka ity karazana fitsangatsanganana ity rehefa tsy manana traikefa ara-barotra na cryptocurrency taloha ianao. Izany no antony hamelako ny tenako hiaraka aminao, hanampy anao hametraka ny kaontinao eo anelanelanao broker (broker) ary ny anao robot fanaovana varotra, valio ireo fanontaniana mifandraika ary omeo fanohanana ara-teknika. Raha tsy hitanao ny rohy mifandray amin'ny robots sasany dia satria tsy tiako ny milaza an'io: na manao audit aho, na mampiahiahy. Ankoatr'izay, tsy maintsy mahay mitantana ny fanohanana ara-teknika ianao ary manaraka tsara ny referrals anao, noho izany dia tsy maka risika aho hanome anao rohy referral tsy misy fetra.
Broker ASIC voasoratra anarana
🥇 Minitra min. ± $ 250
🥇 Min. ± 1300$
Miandry ao Pansaka
renivohitra min. ± €50
Minitra renivohitra. ± $ 10
Misy fampahalalana tsy ampy anao ve?
Aza misalasala mifandray amiko amin'ny 💬 Telegram hahafahako manoro hevitra anao sy manampy anao.
Mitandrema amin'ny fisolokiana Forex amin'ny tranonkala
Jereo ny lisitra mainty an'ny orinasa sy tranonkala tsy nahazoana alàlana navoakan'ny AMF. Tsy misy ny robotsintsika na brokertsy tafiditra.
Ny fampisehoana taloha dia tsy antoky ny fahombiazan'ny ho avy.
Tsy misy fampisehoana avo tsy misy risika be. Eo amin'ny tsenan-tahiry, ny fahombiazan'ny lasa dia tsy voatery hamerina azy.
Tsy misy toro-hevitra momba ny fampiasam-bola amin'ity tranokala ity
Ny varotra dia mampibaribary anao amin'ny risika amin'ny fatiantoka mitovy amin'ny petra-bola ary mety ho an'ny mpanjifa mahalala tsara izay manana fomba ara-bola hizaka izany loza izany ihany. Ny vokatra teo aloha dia tsy manondro ny vokatra ho avy. Ny mpitsidika dia tompon'andraikitra irery amin'ny fampiasana ny fampahalalana azo ary mandray ny loza rehetra mifandraika amin'ity fampiasana ity. Indrindra indrindra, anjaran’ny mpitsidika ny mandray ny fepetra rehetra ilaina amin’ny fitandroana ny fahamarinan’ny renivohitra. Robots-trading.fr, cryptonithe.com na mon-conseiller-crypto.fr sy ny mpitantana azy dia tsy afaka tompon'andraikitra amin'ny fahavoazana mety hitranga.
Vakio ny anay Fepetran'ny serivisy ary ny antsika Sata mangarahara.